GUDOOMIYE CABDIRAXMAAN CIRO OO KA HADLAY MUSHARAXNIMADA PRO. CABDISALAAN YAASIIN IYO KHILAAFKA XISBIGA UCID. | Saxil News Network
GUDOOMIYE CABDIRAXMAAN CIRO OO KA HADLAY MUSHARAXNIMADA PRO. CABDISALAAN YAASIIN IYO KHILAAFKA XISBIGA UCID.
Hargeysa (SAXILNEWS.COM)_Guddoomiyaha Golaha wakiilada ahna Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa sheegay in uu dhawaan banayn doono kursiga Guddoomiyenimada Golaha wakiillada ee Somaliland. Cabdiraxman Cirro oo waraysi gaar ah siiyey weriye MAXAMED ILKACASE Oo ROYAL TV Ka tirsan ayaa waxyaabaha uu ka warramay guddoomiyuhu waxaa kamid ahaa aragtidiisa ku qotonta damaca uu Cabdisalaan Yaasiin Maxamed oo Aasaaseyaashii SNM Ka Mid ahi ku shaaciyey hankiisa siyaasadeed ee ku wajahan doorashada musharraxa madaxweyanaha ee xisbiga WADDANI, kaasi oo baroofisarku ku shaaciyey in uu isu sharraxayo musharraxa madaxweynaha. Guddoomiye cirro waxa uu ka hadlay is sharraxaada Prof Cabdisalaan Yaasiin oo uu sheegay in uu
dhaweynayo tartankiisa iyo cid kasta oo kula loollanta saaxadda Waddaniba.
Guddoomiye Cirro sidoo kale wuxuu xisbiga UCID ugu baaqay inay khilaafkooda ku dhammaystaan shuruucdooda iyo hab walaaltinimo leh, isagoo sidoo kale sheegay in wixii shuruudo ah ee ay ku xidhaan isbahaysiga Kulmiye ay Waddani ahaan fulinayaan. Cabdiraxman Maxamed Cabdilaahi (Cirro) waxa uu ugu horeyn ka jawaabay su’aal laga waydiiyey wakhtiga uu banayn doono Guddoomiyenimada Golaha wakiilada waxanu ku jawaabay sidan. “Waa Hubaal in aan banaynayo golaha wakiilada, wakhtigeedu wuu soo dhaw yahay, wakhtiga ku munaasibka ayaan ku dhawaaqayaa haddii Illaahay yidhahaado”Ayuu yidhi Cirro.
Waxa kale oo la waydiiyey in sida uu u arko Prof: Cabdisalaan Yaasin oo ku dhawaay in uu yahay Murashax u Tartamaya Madaxweynenimada Xisbiga Waddani dhexdiisa, iyo sida uu u arko in xisbiga lagula taramo waxnau yidhi. “Xisbigu waa Xisbi dimuqraadi ah wax kasta oo uu dhigayo xeerka Xisbiga iyo xeerarka Jamhuuriyada Somaliland oo muwaadinka xaq u siyey qofku xaq buu u leeyahay, marka hala gaadho wakhtiga murashaxnimada, laakiin anigu ma jeceli in aan suuqa iska sii sharaxo, Musharaxnimadayduna waxay iman doonta wakhtiga shirka”ayuu yidhi Guddoomiye Cirro.
waxa kale oo uu ka hadlay sida uu u arko dib u dhac aku yimid Diwaangalinta Codbixiyaasha Waxanu yidhi. “doorashada waa la mudeyey oo waxay dhacaysaa Bisha March 2017-ka , in kasta oo diwaangalintu in ay bilaamanto November ay ahayd, balse waxa hakad galay lacagtii deeq bixiyaashu bixinayeen, laakiin xogta aanu hada helayaa waxa weeyi in lacagtaasi la helay, diwaangalintu ay bilaamayso wakhtiga ay inoo sheegan Komishanku. Waxa kale oo la waydiiyey in ay ka cabsi qaban in doorashadu dib u dhacdo iyo in kale. “Anigu boqolkiiba boqol doorashadu way dhacaysaa ayaan aamin sannahay, laakiin ma jirto wax carqalad ah oo doorashada hor istaagikarta oo ii muuqda ma jirto”Ayuu yidhi Cirro.